हलिउड अभिनेत्रीको सम्पत्ति नेपालीलाई « नेपाली मुटु
« तपाईँको ‘फेसबुक’ उनीहरुको पैसा कमाउने माध्यम
के गर्लान् महासघंहरुले ? »
तर, सम्पत्तिसँगसँगै तामाङमाथि लाखौं डलरको करको जिम्मेवारी पनि सरेको छ। त्यसैले उनले दुईमध्ये एक भवनलाई बिक्री गर्ने सोच बनाइसकेका छन् र उनले अपेक्षा गरेको मूल्य हो, ४५ लाख डलर। तामाङ अहिले क्विन्सको छुट्टै घरमा १० वर्षीया छोरी र पत्नीसँग बस्छन्। ‘जहाँ तिम्रो छाना, खाना र नाना छ, त्यहीँ खुसी हुनुपर्छ,’ तामाङले भने। तामाङ नेपालका एक किसान परिवारबाट २२ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा प्रवेश गरेका थिए। ‘मैले मेरो बुबाको घर र दुई बच्चालाई घरमा छाडेर अमेरिकामा आई काम गर्न थालेको हुँ,’ उनले सुनाए।
हलिउडमा ५० वर्ष बिताएकी अभिनेत्री रुथ फोर्डको सन् १९४० को दशकमा अभिनेता पिटर भ्यान इकसँग पहिलो बिहे भएको थियो। तर, त्यो सम्बन्ध लामो समय नटिकेपछि उनले अर्का फिल्म कलाकार जाकारी स्कटसँग बिहे गरेकी थिइन्। स्कटको पनि १९६५ मा निधन भएको थियो। रुथले आफ्ना छोरी र नातिनातिना हुँदाहुँदै सबै धनसम्पत्ति तामाङको नाममा सुम्पिएकी हुन्। रुथले पहिलोपटक सन् १९३८ को ‘टुमच जोनसन’ र पछिल्लोपटक १९८५ को ‘टु स्केयर्ड टु स्क्रिम’मा अभिनय गरेकी थिइन्।
This entry was posted on May 14, 2010 at 10:44 pm	and is filed under अनौपचारिक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.